Shina rivotra masoaryro mifangaro eny an-dalana fahazavana mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Home > Products > Solar Street Light > rivotra masoandro mifangaro eny an-dalana fahazavana
ny jiro afovoan'ny hazavana amoron-dranomasina no mandray ny bateria mitarika be-acid be dia be tsy manam-paharoa mba hanomezana herinaratra ampy ho an'ny jiro mifameno amin'ny haino aman-jery amin'ny masoandro, izay manome antoka ny fotoan'ny jiro LED mifameno amin'ny hazavana eny an-dalambe amin'ny andro orana. , izay manatsara betsaka ny fahamarinan'ny rafitra. Ireto misy tombony lehibe:
Miaro ny angovo sy mihena ny famoahana angovo, miaro ny fiarovana ny tontolo iainana; tsy misy vidin'ny herin'aratra amin'ny vanim-potoana taty aoriana; lasa fironana amin'izao fotoana izao ny fiaraha-monina sy ny fiaraha-monina amin'ny tontolo iainana. Raha ampitahaina amin'ny jiro nentin-drazana, ny jiro mifameno amin'ny haino aman-jery mifangaro amin'ny herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro dia mampiasa angovo azo havaozina voajanahary sy angovo ho angovo toy ny loharanom-angovo, aza mitrandraka loharano angovo azo havaozina, ary aza manary entona fandotoana fandotoana ho amin'ny habakabaka, ary mampihena ny fandotoana fivoahana ho aotra. Nandritra ny fotoana ela, ny fiarovana ny tontolo iainana dia miharihary ny tenany, ary manafoana ny vidin'ny fandaniana herinaratra ao anatin'ny fotoana taty aoriana.
Ny tetikasa fametrahana tariby dia esorina, ary maro ny famatsiana herinaratra no tsy takiana hamboarina; sarotra ny fomba fandidiana ny tetik'asan'ny jiro mains, ary ny fototry ny asa toy ny fantsom-bary an-tariby, fametrahana fantsona, fantsona fantsona, famerenam-bidy, sns dia mitaky asa be; mandritra izany fotoana izany, mpanova, kabinetra mizara herinaratra, ary mizara Fitaovana elektrika lehibe toy ny takelaka elektrika koa dia mandany vola be. Ny jiro mifameno eny an-dàlana dia tsy hisy, ny jiro tsirairay avy amin'ny arabe dia olon-tokana tsy misy ilana azy, tsy mila tariby, tsy mila fitaovana elektrika be dia be, manavotra olona sy manangom-bola.
Ny fahasimban'ny tsirairay dia tsy misy fiantraikany amin'ny toe-javatra ankapobeny, ary tsy voakasiky ny fahatapahan'ny herinaratra lehibe; satria ny jiro ara-dalambe dia fifandraisana amin'ny tariby, azo inoana fa misy fiantraikany amin'ny rafitra famatsiana herinaratra manontolo noho ny olan'ny tsirairay; tsy toy izany ny jiro circuit complikan'ny rivotra-masoandro. Ao amin'ny rafi-pamokarana herinaratra tsy miankina dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fanodinana mahazatra ny jiro arabe hafa. Na dia eo aza ny fahatapahan'ny herinaratra lehibe, tsy ho voakasik'izany ny jiro ary mihena tanteraka ny fahaverezan'ny tsy voafehy.
Izy io dia manangona tariby be dia be loatra ary mihoatra ny fahaverezan'ny fangalarana tariby; fametrahana làlan-jiro any amin'ny faritra lavitra izay tsy dia be amin'ny zorony, lafo ny vidin'ny fametrahana, ary hisy ny halatra lehibe. Raha avy nangalatra, miantraika amin'ny famokarana herinaratra manontolo dia goavana ny fatiantoka. Tsy hampanahy izany ny fampiasana jiro mifameno amin'ny hazavana an'habakabaka. Ny jiro tsirairay avy dia tsy miankina ary tsy misy fifandraisana an-tariby. Na dia mitranga aza ny halatra dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fandidiana mahazatra ny jiro an-dalambe hafa, ary hihena ny fatiantoka.
Ny fanaraha-maso ny saina, manafoana ny fandefasana manual, ny fananganana tsotra ary ny fikojakojana mora; ny jiro sy ny hazavana mifameno amin'ny herin'ny masoandro dia fehezin'ireo mifehy an-tsaina, izay azo zaraina ho maoderina roa fanaraha-maso mandeha ho azy: ny fifehezana ny fotoana ary ny fanaraha-maso maivana, izay sady tsy azo antoka sy ara-ekonomika; Tsy voakasik'izany ny fananganana faritra lehibe, ny fizotrana dia tsotra, fohy ny fotoam-panamboarana, ary mety kokoa ny fikojakojana.
24V 35w Solnyr nynnynnynny nymin'ny Windmill eny nyn-dnylnynny LED fnyhnyznyvnynny rivotrny mnysonyryro mifnyngnyro eny nyn-dnylnynny fnyhnyznyvnynny mnysonyryro ivelnyn'ny trnyno fnyhnyznyvnynny mpnymnytsy nyry mpnynnymbonytrny Lnyngxu mijery hnyndroso ny ny fividinynnynny, isikny diny mnynome inynnyo nymin'ny ny chenyp pricelist nyry ny tsara indrindra quotnytion for inynnyo!
Buy rivotra masoandro mifangaro eny an-dalana fahazavana nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba rivotra masoandro mifangaro eny an-dalana fahazavana ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized rivotra masoandro mifangaro eny an-dalana fahazavana Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.